Intra-uterine Fetal Death(IUFD) - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကြှနျမ သဆေုံးခွငျးတရားကျု ကွုံဖူးပါတယျ။ နီးစပျရာ ဆှေးမြိုး၊ ခဈြခငျသူတှေ သဆေုံးတာကို မွငျဘူးကွုံဖူးနကွေ။
ဒါပမေယျ့ ဒီတခါ ဘာနဲ့မှမတူ ရငျဘတျတဈခုလုံး ဆှဲထုတျခံရ ခံစားခကျြမြိုး။
ကိုယျ့ဝမျးနဲ့ ၈လကြျောလှယျထားတဲ့ကလေး ရုတျတရကျမမှေးသေးခငျ သဆေုံးသှားတယျဆိုတဲ့အဖွဈ။
ကလေးမလှုပျဘူးထငျလို့ ဆေးရုံသှားပွတော့ ” သမီးကလေး အသကျမရှိတော့ဘူး၊ သားအိမျညှဈဆေးသှငျးပွီး ရိုးရိုးမှေးကွညျ့ရမယျ” ဆိုတဲ့ ဆရာဝနျမရဲ့ စကားပွောဟနျ ၊။
ဘယျဟာကိုမှ မမေ့ရနိုငျ ဖွဈနတေယျ။ ကိုယျလဲ သခြောဆေးခနျးပွ ကိုယျဝနျအပျပါရဲ့နဲ့။ ခုလောလောဆယျ ကိုယျပွနတေဲ့ ဆရာဝနျမကိုပဲ မကွညျ့ခငျြလောကျအောငျမုနျးနမေိသညျ။
ဆေးရုံမှာ လာအားပေးသူတှေ ရှိပါရကျနဲ့လညျး စိတျအားမတကျနိုငျ။
ဒီနတေ့ော့ ငယျသူငယျခငျြး ဒေါကျတာမလေး လာကွညျ့မယျလျု့ အမြိုးသားကပွောတယျ။ သူငယျခငျြးလေးရောကျလာတော့ ” ကိုယျဆရာဝနျတှကေို မကနြေပျတဲ့အကွောငျး အားမနာတနျးပွောခလြိုကျသညျ။
သူငယျခငျြးကတော့ ဂရုဏာမကျြဝနျးနဲ့ ” နငျအခု ဖွမေဆယျနိုငျခံစားနရေမှာသိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ငါရှငျးပွပါရစေ။
ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတိုငျးဟာ ကလေးကို လှယျကူအန်တရာယျကငျးစှာဖှားမွငျဖို့ မြှျောလငျ့ကွတာခညျြးပဲ။
ကိုယျဝနျဆောငျခွငျးဟာ အလုံးစုံ အန်တရာယျကငျး တယျဆိုရငျ” ယောကျြားဖောငျစီး မိနျးမ မီးနေ” လို့ စကားပုံတောငျပျေါလာမယျ မထငျပါဘူး။
ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ ၉ လလုံးမှာ မိခငျတိုငျးဟာ ပြျောရှငျကွရတယျ။ကွညျနူးပီတိဖွဈကွရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ကံမကောငျးတဲ့ မိခငျတှအေနနေဲ့တော့ မမှေးခငျ “ဝမျးဗိုကျတှငျး ကလေးသဆေုံးခွငျး” အခွအေနကေို သှေးပကျြဖှယျကွုံတှရေ့တတျပါတယျ။
“ဝမျးဗိုကျတှငျး ကလေးသဆေုံးခွငျး” ဆိုတာဟာ ကိုယျဝနျ ၂၈ပတျ( ၇လ) ကြျောမှ သားအိမျအတှငျးမှာ ကလေးနှလုံးမခုနျတော့၊ အသကျမရှိတော့တာကို ဆိုလိုတာပေါ့ဟာ။
တဈခြို့မိခငျတှဆေိုရငျ ဝမျးနညျးစရာကောငျးလောကျအောငျကို ကလေးမှေးခါနီးတဈပတျအလိုမှာ ဝမျးဗိုကျတှငျးကလေးသဆေုံးလို့ အလှနျယူကြုံးမရဖွဈကွရပါတယျ။
တဈခါတဈခါ ဆရာဝနျနဲ့ လူနာကွား ဒီကိစ်စကွောငျ့ နားလညျမှုလှဲတာတှေ၊ အထငျမှားတာတှလေညျး ဖွဈတတျပါတယျ။ မိခငျအနနေဲ့လညျး ရုတျတရကျ ကလေးဗိုကျထဲမှာ လှုပျရှားနရောက ရုတျတရကျ မလှုပျရှားတော့တာကို အလှယျတကူလကျခံနိုငျဖို့ကို အလှနျခကျလိမျ့မယျဆိုတာ နငျလဲ သိမှာပါ။
ဒါဆို ဘယျအကွောငျးအရာတှကေ ဒီလိုဖွဈစတောလဲ?
တကယျတော့ ဖွဈစရေတဲ့ အကွောငျးအရငျးတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။
( ဥပမာ… သှေးတိုးရောဂါ၊ ဆီးခြို၊ အလှနျသှေးအားနညျးတာ၊ ကြောကျကပျနာတာရှညျယောငျတာ)
ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ ကိုယျဝနျဆိပျတကျတာ၊ သှေးဆငျးတာ
(ဥပမာ.. ငှကျဖြား၊ အသညျးရောငျ၊ ဂြိုကျသိူး၊ ရယေုနျ၊ ရာသီတုပျကှေး၊ ပါးခြိတျ) * ဒီရောဂါတှေ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ ဖွဈပှားသူတိုငျးကို မဆိုလိုပမေယျ့ ဒီရောဂါဖွဈပှားသူတှမှော တှရေ့တတျပါတယျ။*
အမနေဲ့ ကလေးသှေးမတညျ့တာ( အမသှေေး Rh negative ဖွဈနတော)
Due date ( ခနျ့မှနျးမှေးဖှားရကျတျောတျောကြျောတဲ့အထိမမှေးတာ)
ကိုယျဝနျဆောငျစဉျမသောကျသငျ့တဲ့ဆေး သောကျမိတာ အခြိုးသော ၂၀% ၃၀% ကတော့ ဘာအကွောငျးမှ ရှာမရဘဲ ဝမျးဗိုကျတှငျးသဆေုံးသှားတတျပါတယျ။
ဒီအခကျြတှေ ကွညျ့ရငျ ဘယျသူ့အမှားရယျလို့ပွောမရသလို၊ ကာကှယျဖို့ဆိုရငျ အပျေါက အခကျြတှကေို ကိုယျဝနျအပျခွငျး၊ ကုသခွငျးတို့နဲ့ စောစီးစှာ သိရှိထားဖို့ပါပဲ။
အဲ့လို အပျထားရငျးကမှ ကလေး လှုပျတာနညျးတာ၊နဲ့ခကျြခငျြး ဆေးရုံဆေးခနျးပွဖို့၊ သတိရှိဖို့ပါပဲ”
” အဲ့တော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုရော၊ သူမြားကျုရော အပွဈမတငျပါနဲ့ ဟာ၊ အခုနကေောငျးအောငျနေ၊ ကလေးလေးအတှကျပဲ ဆုတောငျးပေးလိုကျကွရအောငျ”
” အေး နငျပွောတော့ ငါတျောတျော ဖွလေို့ရသှားပါတယျ။ ဘယျသူ့ကိုမှ အပွဈမတငျတော့ပါဘူး။”
ကြှနျမစိတျထဲမှာတော့ ” အျော လူ့လောကထဲ ရောကျခှငျ့မရလိုကျတဲ့ ကလေးပါလား”လို့တှေးရငျး။
ကျွန်မ သေဆုံးခြင်းတရားက်ု ကြုံဖူးပါတယ်။ နီးစပ်ရာ ဆွေးမျိုး၊ ချစ်ခင်သူတွေ သေဆုံးတာကို မြင်ဘူးကြုံဖူးနေကြ။
ဒါပေမယ့် ဒီတခါ ဘာနဲ့မှမတူ ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး ဆွဲထုတ်ခံရ ခံစားချက်မျိုး။
ကိုယ့်ဝမ်းနဲ့ ၈လကျော်လွယ်ထားတဲ့ကလေး ရုတ်တရက်မမွေးသေးခင် သေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်။
ကလေးမလှုပ်ဘူးထင်လို့ ဆေးရုံသွားပြတော့ ” သမီးကလေး အသက်မရှိတော့ဘူး၊ သားအိမ်ညှစ်ဆေးသွင်းပြီး ရိုးရိုးမွေးကြည့်ရမယ်” ဆိုတဲ့ ဆရာဝန်မရဲ့ စကားပြောဟန် ၊။
ဘယ်ဟာကိုမှ မေ့မရနိုင် ဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ်လဲ သေချာဆေးခန်းပြ ကိုယ်ဝန်အပ်ပါရဲ့နဲ့။ ခုလောလောဆယ် ကိုယ်ပြနေတဲ့ ဆရာဝန်မကိုပဲ မကြည့်ချင်လောက်အောင်မုန်းနေမိသည်။
ဆေးရုံမှာ လာအားပေးသူတွေ ရှိပါရက်နဲ့လည်း စိတ်အားမတက်နိုင်။
ဒီနေ့တော့ ငယ်သူငယ်ချင်း ဒေါက်တာမလေး လာကြည့်မယ်လ်ု့ အမျိုးသားကပြောတယ်။ သူငယ်ချင်းလေးရောက်လာတော့ ” ကိုယ်ဆရာဝန်တွေကို မကျေနပ်တဲ့အကြောင်း အားမနာတန်းပြောချလိုက်သည်။
သူငယ်ချင်းကတော့ ဂရုဏာမျက်ဝန်းနဲ့ ” နင်အခု ဖြေမဆယ်နိုင်ခံစားနေရမှာသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါရှင်းပြပါရစေ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တိုင်းဟာ ကလေးကို လွယ်ကူအန္တရာယ်ကင်းစွာဖွားမြင်ဖို့ မျှော်လင့်ကြတာချည်းပဲ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဟာ အလုံးစုံ အန္တရာယ်ကင်း တယ်ဆိုရင်” ယောကျာ်းဖောင်စီး မိန်းမ မီးနေ” လို့ စကားပုံတောင်ပေါ်လာမယ် မထင်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ၉ လလုံးမှာ မိခင်တိုင်းဟာ ပျော်ရွှင်ကြရတယ်။ကြည်နူးပီတိဖြစ်ကြရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းတဲ့ မိခင်တွေအနေနဲ့တော့ မမွေးခင် “ဝမ်းဗိုက်တွင်း ကလေးသေဆုံးခြင်း” အခြေအနေကို သွေးပျက်ဖွယ်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
“ဝမ်းဗိုက်တွင်း ကလေးသေဆုံးခြင်း” ဆိုတာဟာ ကိုယ်ဝန် ၂၈ပတ်( ၇လ) ကျော်မှ သားအိမ်အတွင်းမှာ ကလေးနှလုံးမခုန်တော့၊ အသက်မရှိတော့တာကို ဆိုလိုတာပေါ့ဟာ။
တစ်ချို့မိခင်တွေဆိုရင် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလောက်အောင်ကို ကလေးမွေးခါနီးတစ်ပတ်အလိုမှာ ဝမ်းဗိုက်တွင်းကလေးသေဆုံးလို့ အလွန်ယူကျုံးမရဖြစ်ကြရပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါ ဆရာဝန်နဲ့ လူနာကြား ဒီကိစ္စကြောင့် နားလည်မှုလွဲတာတွေ၊ အထင်မှားတာတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိခင်အနေနဲ့လည်း ရုတ်တရက် ကလေးဗိုက်ထဲမှာ လှုပ်ရှားနေရာက ရုတ်တရက် မလှုပ်ရှားတော့တာကို အလွယ်တကူလက်ခံနိုင်ဖို့ကို အလွန်ခက်လိမ့်မယ်ဆိုတာ နင်လဲ သိမှာပါ။
ဒါဆို ဘယ်အကြောင်းအရာတွေက ဒီလိုဖြစ်စေတာလဲ?
တကယ်တော့ ဖြစ်စေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
( ဥပမာ… သွေးတိုးရောဂါ၊ ဆီးချို၊ အလွန်သွေးအားနည်းတာ၊ ကျောက်ကပ်နာတာရှည်ယောင်တာ)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်တာ၊ သွေးဆင်းတာ
(ဥပမာ.. ငှက်ဖျား၊ အသည်းရောင်၊ ဂျိုက်သိူး၊ ရေယုန်၊ ရာသီတုပ်ကွေး၊ ပါးချိတ်) * ဒီရောဂါတွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဖြစ်ပွားသူတိုင်းကို မဆိုလိုပေမယ့် ဒီရောဂါဖြစ်ပွားသူတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။*
အမေနဲ့ ကလေးသွေးမတည့်တာ( အမေသွေး Rh negative ဖြစ်နေတာ)
Due date ( ခန့်မှန်းမွေးဖွားရက်တော်တော်ကျော်တဲ့အထိမမွေးတာ)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မသောက်သင့်တဲ့ဆေး သောက်မိတာ အချိုးသော ၂၀% ၃၀% ကတော့ ဘာအကြောင်းမှ ရှာမရဘဲ ဝမ်းဗိုက်တွင်းသေဆုံးသွားတတ်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေ ကြည့်ရင် ဘယ်သူ့အမှားရယ်လို့ပြောမရသလို၊ ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် အပေါ်က အချက်တွေကို ကိုယ်ဝန်အပ်ခြင်း၊ ကုသခြင်းတို့နဲ့ စောစီးစွာ သိရှိထားဖို့ပါပဲ။
အဲ့လို အပ်ထားရင်းကမှ ကလေး လှုပ်တာနည်းတာ၊နဲ့ချက်ချင်း ဆေးရုံဆေးခန်းပြဖို့၊ သတိရှိဖို့ပါပဲ”
” အဲ့တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရော၊ သူများက်ုရော အပြစ်မတင်ပါနဲ့ ဟာ၊ အခုနေကောင်းအောင်နေ၊ ကလေးလေးအတွက်ပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ကြရအောင်”
” အေး နင်ပြောတော့ ငါတော်တော် ဖြေလို့ရသွားပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မတင်တော့ပါဘူး။”
ကျွန်မစိတ်ထဲမှာတော့ ” အော် လူ့လောကထဲ ရောက်ခွင့်မရလိုက်တဲ့ ကလေးပါလား”လို့တွေးရင်း။